Semalt: Brief Summary Of Spam Uye Scam Terminology
Indaneti ine mikana yakasiyana, iyo izere nevanhu vane zvinangwa zvakasiyana. Kune nyaya ye spam, kune vadzidzisi veTI vane pfungwa huru iyo inowanzoshandisa kusagadzikana kwehutano nekusaziva kwevanhu kuti kuita mabasa e-internet ave neropafadzo. Semuenzaniso, kune dzakawanda maitiro apo vanhu vanowira nehupenzi pamwe chete nedzimwe nzira dzekuchera. Kuparadzaniswa kunokonzera kurasikirwa kukuru sezvo vachigona kushanda pamwechete nevashambadzi kuti vape mari yakawanda kubva kune avo vakaurayiwa.
Patinenge tichiita mawebhusayithi, mugumo wekupedzisira inowanzoshandiswa - employee manager self service. Nokudaro, zvese zvatinoita zvinobatsira kuita kuti kutenga kwekutenga kubudirire, pamwe nekuita kuti mutengi anzwe zvakanaka. Tinokundikana kufunga kuti mukana wevaseki vanotambudza webhusaiti yako uye yevaya vanonyadzisa. Kune nzira dzakawanda dzinobatsira vadzidzisi vepawebsite kuti vadzivise spam. Yeuka kuchengeteka kwekushandisa nzvimbo yako yepamusoro pamwe chete neyekuita kuti vatengi vechokwadi vave vakachengeteka vanovimba nehubudirira hwehutsananguro-spam nzira munzvimbo.
Ivan Konovalov, the Semalt Mutengi Wakabudirira Mutevedzeri, zvipo kuti iwe uchenjere maitiro anotevera akashandiswa nevanhu:
Zvinyorwa zvinyorwa. Vanhu vanogona kushandisa maeils kutumira Trojans kune vanhu vasingafungi. Iyi nzira inoshanda kuburikidza nekuita kuti munhu atumire email inoshandura mutambi wemushandisi PC, zvichida kuregeredza kuchengeteka kwekushandisa shanduro..Zvirwere zvinowanzobatana neTrojans zvinogona kupinda mukati mechirwere chekuvhiringidza ichiita kuti zvizarurire kurwisa. Vanokwanisa kudzora hardware yemakombiyuta pamwe nekunyora zvinyorwa zvinyorwa uye passwords. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, kune nzira dzakawanda kuburikidza nazvo izvo zvigadziriswe izvi zvinogona kukonzera dambudziko pamakombiyuta evanhu vanenge vashandurwa.
Adware. Kune matanho akawanda akavhara muchengeti wevashandisi vepaIndaneti. Somugumisiro, vanhu vane vavariro dzakaipa vanogona kushandisa nzira iyi yekuita mabasa avo. Semuenzaniso, vanhu vanogona kutumira mavairasi muzita rezviziviso. Iyi software inopinda mumakombiyuta evanhu uye inoita kuti mapurisa ave nyore kukurwisa zvakanyanya. Iwe unofanirwa kuchenjerera maofirati ezvinoshandiswa zvaunoshandisa pakombiyuta yako. Zvakare, zvinhu zvakawanda zvinotengeswa zvinogona kunge zvine zvigadzirwa zvemarware.
DoS / DDoS Inopesana. Mune marudzi aya ekurwisana, vatengesi vanoedza kuburutsa webhusaiti kuburikidza nokuwedzeredza sevha nezvikumbiro. Nzira iyi inowedzera kubhururuka kwekuita kuti webhusaiti yacho isakanganise uye zvisingagoneki. Vanokanganisa vanogona kusimbisa kubudirira kweiyo nzira kuburikidza kushandisa maitiro akawanda emabhodaneti.
Kune marudzi akawanda evanhu vachishandisa webhu. Sezvo vanhu vachiramba vachigadzira mawebsite anobatsira uye ezvokutengeserana, vamwe vanoisa pfungwa pakusimbisa hutano hwavo hwekunyengedza kuti vashandise mamiriro ekuchengeteka kwekuchengetedza. Somugumisiro, mabhizinesi anorarama mukutya nguva dzose kwekutarisana nehukuru huck attack pamwe chete nekumwe kurasikirwa kunowanzoitika mukugadzirisa. Mamwe matsotsi anowanzoita anokwanisa kubva kumupikisani, ndiani angaita kuti Search Engine Optimization (SEO) yako isakundikana apo webhusaiti yako inotambudza kuedza kweSERPs. Zvimwe zve spam uye anti-spam nzira dziri panzvimbo yekutsvaga mukuita kuti vanhu vazive, asi kwete kugumisa dambudziko riri kuuya. Iwe unogona kushandisa nhungamiro iyi kushandisa spam-fighter inofamba pawe e-commerce website yako uye inopedza zvinangwa zvakawanda.